Nayakhabar.com: बलिउड अभिनेता : कसको पारिश्रमिक कति ?
बलिउड अभिनेता : कसको पारिश्रमिक कति ?
काठमाडौं । अभिनेता अक्षय दिव्या घोसला कुमारको सिनेमामा ५० करोड पारिश्रमिक लिएर काम गर्न तयार भएको खबर प्रकाशित भएको छ । सिनेमा पण्डितहरुका अनुसार अक्षय कुमार आफ्नो फिल्म फ्लप भयो भने तुरुन्तै पारिश्रमिक घटाउँछन् अनि फिल्म सफल हुनासाथ पारिश्रमिक बढाउँछन् र पहिलेको भर्पाइ गर्छन् । यतिबेला लगातार सिनेमा सफल भएका कारण उनले पारिश्रमिक ५० करोड पुर्याएको अनुमान छ । त्यसो त पारिश्रमिकको मामिलामा अक्षय भन्दा अगाडि सलमान खान छन् । सलमान एक सिनेमामा काम गरेबापत ६० करोड पारिश्रमिक लिन्छन् । सलमानको सिनेमा सुल्तानले बक्स अफिसमा सफलता पायो । सलमान पनि अक्षय जस्तै एक पछि अर्को सिनेमा लगातार सफल भयो भने आफ्नो पारिश्रमिक बढाउने गर्छन् ।
उनी हाल टाईगर जिंदा है र ट्युवलाईटमा व्यस्त छन् । यी दुईसँगै बलिउडका अन्य अभिनेताहरुको पारिश्रमिक र उनीहरुका आगामी सिनेमाबारे पनि थाहा पाउनुहोस् ।
अभिनेता आमिर खान यतिबेला सिनेमा दंगल रिलिजको तयारीमा जुटेका छन् । उनी एक सिनेमामा काम गरेबापत ५० करोड भारु पारिश्रमिक लिन्छन् ।
हाल शाहरुख खान रईसमा व्यस्त छन् । त्यस्तै उनको अर्को सिनेमा डिअर जिन्दगी रिलिजको तयारीमा छ । शाहरुख खानलाई बलिउडका बादशाहका नामले पनि चिनिन्छ । उनी एक सिनेमामा काम गरेबापत ४५ करोड भारु पारिश्रमिक लिन्छन् ।
अभिनेता ऋतिक रोशनको पारिश्रमिक ४० करोड भारु छ । उनको आगामी सिनेमा काबिल हो । हाल उनी यसैको काममा व्यस्त छन् ।
अजय देवगन हाल बादशाहोँ र गोलमाल ४ मा व्यस्त छन् । उनी एक सिनेमामा काम गरेबापत २५ करोड भारु पारिश्रमिक लिन्छन् ।
पारिश्रमिकका हिसाबले रणवीर कपूर पनि अगाडि नै छन् । उनी एक सिनेमामा काम गरेबापत २५ करोड भारु पारिश्रमिक लिन्छन् । हाल उनी सिनेमा जग्गा जासुसको काममा व्यस्त छन् ।
हाल अमिताभ बच्चन सिनेमा सरकार ३ र हेराफेरि ३ मा व्यस्त छन् । उनको पारिश्रमिक अन्य अभिनेताको तुलनामा कम नै मानिन्छ । उनी एक सिनेमामा काम गरेबापत २० करोड भारु पारिश्रमिक लिन्छन् ।
अभिनेता रणवीर सिंह पनि पछिल्लो समयमा धेरै पारिश्रमिक लिने अभिनेताका रुपमा परिचित छन् । उनी एक सिनेमामा काम गेबापत २० करोड भारु पारिश्रमिक लिन्छन् । हाल उनी बेफिक्रेको शुटिङ्ग सकाएर पद्मावतीको तयारीमा छन् ।
सेफअलीको पारिश्रमिक १५ करोड भारु प्रति सिनेमा हो । हाल उनी रंगुनमा व्यस्त छन् ।
जोन अब्राहमको सिनेमा फोर्स २ रिलिजको तयारीमा छ । उनी एक सिनेमामा काम गरेबापत ११ करोड भारु पारिश्रमिक लिन्छन् ।
हाल रंगुन र पद्मावतीमा व्यस्त अभिनेता शाहिद कपूरको पारिश्रमिक ९ करोड भारु प्रति सिनेमा हो ।
अभिशेक बच्चन एक सिनेमामा काम गरेबापत ९ करोड भारु पारिश्रमिक लिन्छन् । हाल उनी हेर फेरि ३ मा व्यस्त छिन् ।
बलिउड सिनेमाका किसर किङग ईमरान हासमी एक सिनेमामा काम गरेको ८ करोड भारु पारिश्रमिक लिन्छन् । हाल उनी बादशाहोँ र क्याप्टन नवावमा व्यस्त छन् ।
अभिनेता रितेश देशमुख एक सिनेमामा काम गरेबापत ५ करोड भारु लिन्छन् । हाल टेलिभिजन शो यारोँ की बारातमा व्यस्त उनका बैंक चोर र मौली आगामी सिनेमाहरु हुन् ।